Guddiga Ammaanka Wakiilada Koofur Galbeed oo ka digay ciidan la geeyey Baydhaba – Kalfadhi
December 1, 2018 Kalfadhi
Guddiga Amaanka Golaha Wakiillada Koofur Galbeed waxay cambaareyn dusha uga tuureen ciidamada la sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ay geysay Magaalada Baydhabo, iyagoo ku eedeeyay kuwo faragelin qaawan ku haaya Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed, oo maanta markii 3-aad dib loo dhigay.
“Awood sheegasho ayaa Dowladda Federaalku ku burburineysaa, amniga iyo horumarka ka jira degaanka (Koofur Galbeed)” ayaa lagu yiri war qoraal ah, oo ka soo baxay Guddiga Amniga ee Golaha Wakiillada Koofur Galbeed. “Kaliya waxaa loo baahnaa in la dhiirrageliyo ciidankii amniga keenay, isla markaana xaqa ka maqan la siiyo Ciidamada Federaalka ka jooga Koofur Galbeed iyo kuwa Maamulka Koofur Galbeed” ayuu yiri Guddigu.
Guddiga Ammaanka Wakiilada Koofur Galbeed waxay sheegeen iney dareemayaan inuu ammaanku faraha kasii baxayo. Waxay ku baaqayaan in ay DFS dib u celiso ciidanka ay geysay Baydhaba. “Waxaan codsaneynaa in ciidankaas loo celiyo halkii laga keenay” ayaa lagu yiri qoraalka Guddiga. Waxa uu mid lagu degdegay ku tilmaamay Guddigu ciidamada la geeyey Baydhaba, “maadaama la keenay iyadoo aan lagala tashan ciddii ay ahayd in laga talageliyo” baa lagu yiri qormada Guddiga.
Wasiirka Amniga Koofur Galbeed ayey sheegeen in ay kaligii ku tahay mar uu ciidankaas la geeyey Baydhaba ku difaacay wareysi uu siiyey Warbaahinta Dowladda, isagoo sheegay iney ciidanku gacan ka geysanayaan sugista ammaanka, waqtiga doorashada. Waxay warkiisa ku tilmaameen sharci darro. “Warsaxaafadeedkiisa, Baarlamaanka Koofur Galbeed waxba kama oga oo lalama soo wadaagin, mana ansixin” ayuu yiri Guddogu.
Guddiga, oo masuuliyadda wixii ka dhasha ciidamadaas dusha ka saaraya DFS, ayaa yiri “waxaan caddeyneynaa in wixii amni darro ah ee hadda Baydhabo ka dhaca ay wakiil ka noqon doonto Dowladda Federaalka iyo shaqsiyaadka loo soo maray keenista ciidan aan xilligiisa la joogin”. Sidoo kale, waxaa qormada Guddiga Amnaanka ee Wakiilada Koofur Galbeed lagu sheegay in ciidanka la geeyo meelaha amnigoodu liito, oo sida uu Guddigu sheegay xaalkeeda la wada ogyahay.
Guddoomiye Mursal oo Muqdisho kusoo noqday iyo Xubnaha Golayaasha oo soo dhaweeyey